မျှဝေပေးပါဦး!!! ပြည်သူအားလုံး အတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်းပါ.. အိမ်ထောင်စု တစု ကို ငွေ (၂) သောင်း … – Let Pan Daily
မျှဝေပေးပါဦး!!! ပြည်သူအားလုံး အတွက် ဝမ်းသာစရာ သတင်းပါ.. အိမ်ထောင်စု တစု ကို ငွေ (၂) သောင်း …
အခြေခံ လူတန်းစား အိမ်ထောင်စုအား အစိုးရ အနေဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ထောက်ပံ့မှု အဖြစ် ငွေကျပ် နှစ်သောင်း စီ ထပ်မံ ထောက်ပံ့ပေးသွားမယ် လို့ သမ္မတရုံး ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီ
အကြောင်းကို သမ္မတ အိမ်တော်တွင် ဇွန်လ ၁၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ အချိန်က ပြုလုပ် ခဲ့သော သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲ တွင် သတင်း ထောက်များ ၏ မေးမြန်းမှု အပေါ့် ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်
အခြေခံလူတန်းစား အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ၅ သန်း ၄ သိန်းကျော် ရှိနေပြီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုလျှင် ငွေကျပ် ၂ သောင်းနှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။ထိုသို့ ထောက်ပံ့ရာတွင် ကနဦး
စမ်းသပ်ခြင်း အနေဖြင့် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ် နှင့် ကလောမြို့နယ် တို့အား Mobile Payment ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်ဒေသ များကို အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားမှ ဖြန့်ဝေသည့် နည်းလမ်းဖြင့်ာင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ပထမအကြိမ် ရိက္ခာ (၅) မျိုး ထောက်ပံ့ရာတွင် ကျန်ရှိခဲ့သည့် အခြေခံ လူတန်းစား အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁ ဒသမ ၄ သန်းကိုလည်း ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်…
မြှဝပေေးပါဦး!!! ပွညျသူအားလုံး အတှကျ ဝမျးသာစရာ သတငျးပါ.. အိမျထောငျစု တစု ကို ငှေ (၂) သောငျး …
အခွခေံ လူတနျးစား အိမျထောငျစုအား အစိုးရ အနဖွေငျ့ ဒုတိယအကွိမျ ထောကျပံ့မှု အဖွဈ ငှကေပျြ နှဈသောငျး စီ ထပျမံ ထောကျပံ့ပေးသှားမယျ လို့ သမ်မတရုံး ပွောရေး ဆိုခှငျ့ ရှိသူ ဦးဇျောဌေးက ပွောကွားလိုကျပါတယျ။ဒီ
အကွောငျးကို သမ်မတ အိမျတျောတှငျ ဇှနျလ ၁၉ ရကျ နံနကျ ၁၁ နာရီ အခြိနျက ပွုလုပျ ခဲ့သော သတငျးစာရှငျး လငျးပှဲ တှငျ သတငျး ထောကျမြား ၏ မေးမွနျးမှု အပေျါ့ ပွနျလညျ ဖွကွေားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။နိုငျငံတဈဝနျးတှငျ
အခွခေံလူတနျးစား အိမျထောငျစု ပေါငျး ၅ သနျး ၄ သိနျးကြျော ရှိနပွေီး အိမျထောငျစု တဈစုလြှငျ ငှကေပျြ ၂ သောငျးနှုနျးဖွငျ့ ထောကျပံ့ရနျ ညှနျကွားထားပွီး ဖွဈကွောငျး ဦးဇျောဌေးက ပွောသညျ။ထိုသို့ ထောကျပံ့ရာတှငျ ကနဦး
စမျးသပျခွငျး အနဖွေငျ့ ပုဗ်ဗသီရိမွို့နယျ၊ မိတ်ထီလာမွို့နယျ နှငျ့ ကလောမွို့နယျ တို့အား Mobile Payment ဖွငျ့ထောကျပံ့ပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး၊ ကနျြဒသေ မြားကို အုပျခြုပျရေး ယန်တရားမှ ဖွနျ့ဝသေညျ့ နညျးလမျးဖွငျ့ာငျရှကျ သှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထို့အပွငျ ပထမအကွိမျ ရိက်ခာ (၅) မြိုး ထောကျပံ့ရာတှငျ ကနျြရှိခဲ့သညျ့ အခွခေံ လူတနျးစား အိမျထောငျစုပေါငျး ၁ ဒသမ ၄ သနျးကိုလညျး ငှကေပျြ ၁၅၀၀၀ နှုနျးဖွငျ့ ထောကျပံ့ပေးသှားမညျ…
နိုဝငျဘာ (၃၀) ရကျ မှ ဒီဇငျဘာ (၇) ရကျ အတှငျး တပတျစာ မိုးလဝေသ အခွအေနေ ( မိုးဇလ ပညာရှငျ ဦးခဈြကြျော)
ဘူတာနား မှာ တယောက် တည်း အိပ်နေတဲ့ အမေကြီး ကို နိုးပြီး မေးမြန်း ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ….
အသက် ၉၂ နှစ် အရွယ်ကြီး နဲ့ လမ်းတကာ ပတ် ဖိနပ် ရောင်းနေ တဲ့ အဖွားရဲ့ လေးစား ဖွယ် ကုသိုလ်